Codashop Facebook Top Fan Giveaway! | Codashop Blog MM
Home News Codashop Face...
Codashop Facebook Top Fan Giveaway!
Codashop ရဲ့ Facebook Page က ဘော်ဒါတွေတောင်းဆိုချက်အရ Top Fan Giveaway လာပါပြီ!
အခုပဲ Codashop MM Facebook Page မှာ Top Fan ဖြစ်ပြီး Giveaway မှာပါဝင်လိုက်ပါ!
Codashop MM Facebook Page သို့သွားရန်
ဤ Giveaway ကြေညာသောပိုစ့်အောက်မှာ #CodashopTopFan ဆိုပြီးကောမင့်ပေးလိုက်ပါ။
Top Fan ဖြစ်ပြီးသားဆိုရင်တော့ Deadline ရောက်တဲ့အချိန်အထိ Top Fan ဖြစ်အောင်ဆက်ပြီးထိန်းထားပါ။
Top Fan မဖြစ်သေးဘူးဆိုရင်တော့ Deadline မတိုင်ခင်အတွင်း Top Fan ဖြစ်အောင်ကြိုးစားလိုက်ပါ။
ဒီနေ့ကစလို့ တစ်ပတ်အကြာ၊ မတ်လ(၃)ရက်နေ့ဖြစ်ပါတယ်။
Deadline နေ့မှာ Top Fan ဖြစ်နေတဲ့သူတွေထဲက (၁၀)ယောက်ကို မဲနှိုက်ရွေးချယ်ပြီး လက်ဆောင်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
ကံထူးသူ (၁၀)ယောက်က (၅,၀၀၀)ဖိုး Codashop မှာဝယ်ယူခွင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
မှတ်ချက်။ ။Codashop Website အတွင်းဝယ်ယူခြင်းအတွက်သာ
Top Fan ဖြစ်အောင် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ?
Facebook Page တစ်ခုရဲ့ Top Fan ဖြစ်ဖို့ဆိုရင် ထို Page မှာ Active ဖြစ်နေရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ပိုစ့်တွေကို လိုက်ခ်လုပ်တာ၊ ကောမင့်တွေပေးတာ၊ ရှယ်တာ၊ Video တွေကြည့်တာ စတာမျိုးတွေလုပ်ပေးခြင်းဖြင့် Active နေမယ်ဆိုရင် Top Fan ဖြစ်နိုင်ချေအများကြီးရှိပါတယ်။
လက်ဆောင်ကံထူးတဲ့ ဘော်ဒါ(၁၀)ယောက်ရဲ့ Facebook အကောင့်ကို Codashop Facebook Page မှတစ်ဆင့် ကြေညာပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
လက်ဆောင်ကံထူးတဲ့ဘော်ဒါတွေက (၅,၀၀၀)ကျပ်ဖိုး Codashop မှ ဝယ်ယူလိုသော ဂိမ်းအမည်နှင့် Account ID ကို Codashop Facebook Page Messenger သို့ ကံထူးသူကြေညာပြီး (၂) ပတ်အတွင်းပေးပို့ထားရမှာဖြစ်ပြီး (၂)ပတ်ထက်ကျော်လွန်ပြီး မပေးပို့ပါက လက်ဆောင်ကိုပြန်လည်ရုတ်သိမ်းသွားမည်ဖြစ်သည်။
Previous articleCodashop ရဲ့ Telegram ကို Join ပြီး ဖုန်းဘေလ်လက်ဆောင်ရယူပါ!
Next articleInternational Women’s Day မှာ ဂိမ်းဆော့တဲ့ကောင်မလေးတွေအကြောင်းဂုဏ်ဆာကြမယ်!
1 March 30, 2022	At	10:41 am
/xfs.bxss.me March 30, 2022	At	10:41 am
1 March 30, 2022	At	10:40 am